Tajikistàna : Nahoana Ny Vehivavy Manambady No Matahotra Ny Rafozany, Na Mbola Alohan’ny Hanambadiany Aza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2017 18:28 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, русский, Ελληνικά, Türkçe, Italiano, polski, Français, 繁體中文, 日本語, English
Fampisehoana an-tsehatra natokana ho fanoherana ny herisetra atao amin'ny vinantovavy any Tajikistàna. Sary avy amin'ny OSCE/Nozim Kalandarov (CC BY-ND 4.0)
Nisy tatitra vao haingana natolotry ny sampan-draharaha miteny Tàjik ao amin'ny Radio Free Europe (RFE/RL) mamintina ireo fanararaotana izay iaretan'ireo tanora zazavavy miaina miaraka amin'ny fianakaviam-badiny any Tajikistàna, firenena any Azia Afovoany. Ny fanehoankevitra eo ambanin'ny lahatsoratra, mandritra izany fotoana izany, dia manaporofo fa na mitombo aza ny tatitra, dia tsy raisina ho zava-dehibe ilay olana.
Misy lalàna tsy voasoratra ao amin'ny fiarahamonina Tàjik : izay miseho ao an-tokantrano dia tsy mivoaka ny tokantrano. Mihatra amin'ny maro an'isa izany, ary mandrakotra, eny fa na amin'ny tranganà herisetra an-tokantrano mahatsiravina indrindra aza. Matetika mijaly ao amin'ny fianakaviana ipetrahany ireo tanora zazavavy araraotina aorian'ny fanambadiany ary lasa vaovao iraisam-pirenena ny vokatr'io fanararaotana io tato ho ato. Nahatsiravina ny fiafaran'ny sasany tamin'ireo trangam-panaraotana noahiahiana, tanatin'ireo tranga maromaro naharaisana tatitra feno.
Nolanian'ny parlemanta Tàjik tamin'ny Desambra 2012 ny lalàna mandràra ny herisetra an-tokantrano noho ny tosika avy amin'ireo sehatra iraisam-pirenena sy ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona
Ohatra ny nisy ny fiovàna. Nandritra ny sivy volana voalohan'ny taona 2017 tany Khatlon irery ihany, any amin'ny faritra atsimon'ny firenena, vehivavy 300 eo ho eo , manambady, no nitaraina noho ny fanararaotana ataon'ny rafozam-baviny azy ireo. Fa na izany aza, ireo vehivavy ireo dia mbola mety ho fanehoana fotsiny ihany ny ampahany hita maso amin'ny vongan-dranomandry.
Nanazava ny antony mampiparitaka ny herisetra an-tokantrano, amin'ny fifantohana indrindra amin'ny olana ara-toekarena sy ara-bola atrehan'ireo fianakaviana maro any Tajikistàna ity lahatsoratra ity, olana izay manery ireo lehilahy hitady vola any Rosia. Voatery mipetraka any amin'ny rafozam-baviny ny vehivavy rehefa tsy eo ny vadiny, tranga izay matetika mahatonga fifanolanana.
Nefa, eo ambanin'ilay lahatsoratra, maro ireo fanehoankevitra manakiana ny fitarainan'ireo tanora zazavavy momba ny fanararaotana ataon'ny rafozam-baviny azy ireo fa tsy mba manohana azy ireo.
Hoy ny fanehoankevitra iray voasoratra eo ambanin'ny anarana Afsus :
Simban'ny fampiasàna finday ny ankizivavy moderina rehetra. Ary inoako fa nitarainan-dry zareo hatramin'ny fampiasàna ny findainy koa. Adiny iray fotsiny no anaovany ny asa aman-draharaha ao an-trano, ary avy eo laniny amin'ny firesahana amin'ny olona amin'ny finday ny roa ora manaraka.
Namazivazy ilay mpaneho hevitra iray hafa amin'ny aterineto :
Tahaka izany daholo ny fitondrantenan'ny olona ato amin'ny fiarahamonina misy antsika. Ohatra, tsy mendrika kokoa noho ny rafozam-bavy ny sojaben'ny sampam-mpampianarana misy antsika.
Mpaneho hevitra iray hafa, Shohin, nanome sosokevitra hanaovana fampianarana manokana momba ny fomba fitondrantenan'ny vehivavy ao anatin'ny fanambadiana.
Mandany vola amin'ny tsy antony ny Vaomiera misahana ny raharaham-behivavy (izay mikarakara ireo fitarainana avy amin'ireo vehivavy ankoatry ny asa hafa). Tokony hisy ny fampianarana manokana manomana ireo tanora zazavavy hanambady…. Tokony hampianatra azy ireo hitondra tena am-pahamendrehana ny reniny.
Tsy maintsy miasa mafy ny fanjakana Tàjik mba hanehoana fa laharam-pahamehana amin'ny governemanta ny herisetra an-tokantrano, ary ireo lalàna miaro ireo niharam-boina dia miasa na amin'ny fampiharana na ara-taratasy.